မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများအကြောင်း – Blue Sea
blueseaskt | August 16, 2019 | Celebrities | No Comments
*** မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများအကြောင်း ***
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများ စာရင်းများအနက် Frontier Myanmar မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိပ်တန်း (၆) ဦးမှာ
(၂) ဦးထွန်းမြင့်နိုင် (ခ) စတီဗင်လော (Asia World)
(၄) ဦးသိမ်းဝေ (ခ) ဆာဂ်ျ့ပန်း (FMI & Yoma)
ဦးဇော်ဇော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်ဘတ်စ်ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ဂျင်နရေတာမီးစက်များ တင်သွင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေက တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး နေပြည်တော်မှာ ဘောလုံးကွင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းအပါအဝင် စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဦးဇော်ဇော်ကို အမေရိကန်က နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဦးဇော်ဇော်ဟာ ကလေးဆေးရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများမှာ ဆေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေဘေးသင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများကို ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီပုံရိပ်ကို နာမည်ဆိုးများမှ လွတ်မြောက်စေရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် မက်စ်မြန်မာ ဂရု(ပ်) Max Myanmar Group ၏လုပ်ငန်းများထဲ၌ ပါဝင်လာခဲ့သော မက်စ်ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နိုဗိုတယ် ဟိုတယ် Novotel Hotel နှင့် မွန်ပြည်နယ်မှ ရာဘာစိုက်ခင်းတို့က သိသာထင်ရှားလာသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။
2. ဦးစတီဗင်လော (ဦးထွန်းမြင့်နိုင်)
ဦးစတီဗင်လောသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၌ အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးသူ လော်စစ်ဟန်၏သား ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သားအဖနှစ်ဦးသည် အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ရာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရောင်းချမှုကို ဖုံးကွယ်ရန် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဦးစတီဗင်လောက အဖေဖြစ်သူ၏ ဘိန်းအင်ပါယာလုပ်ငန်းကို စွန့်ခွာပြီး တရားဝင်လုပ်ငန်းများဘက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ အေးရှားဝေါသည် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ခြင်းတွင် အဓိက ပါဝင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် နေပြည်တော် လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သည့် ဦးစတီဗင်လောကို အမေရိကန်နိုင်ငံက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။
အေးရှားဝေါသည် ရန်ကုန်မြို့၏ အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ကိုင်တွယ်ထားပြီး ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တိုးချဲ့မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၌လည်း ပါဝင်နေသည်။ ဦးစတီဗင်လောသည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်း ကုမ္ပဏီများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စင်ကာပူကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်လည်း အဓိက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မကွေး ဘောလုံးအသင်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ဦးတေဇသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဆန္ဒပြမှုများမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရင်းနှီးသူလည်းဖြစ်ကာ ၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်မဟုတ်သော နည်းများနှင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဆိုသည်။ ထို့နောက် ၎င်းက ယခင် စစ်အစိုးရ အဓိကခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ ပြောသမျှကို လိုက်လံ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အလမ်းသာမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၎င်းကို “မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် လက်နက်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လက်ကိုင်တုတ်တစ်ဦး”အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၎င်းက ထူး ဂရု(ပ်) ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝေးလံသောဒေသများမှ ကျွန်းသစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယင်းကုမ္ပဏီက နေပြည်တော်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အအုံများကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများမှာ အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် Asia Green Development Bank၊ ကန်တော်ကြီး ပဲ့လေ့စ်ဟိုတယ် Kandawgyi Palace Hotel၊ အဲပုဂံလေကြောင်းလိုင်း Air Bagan နှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်း Yangon United Football Club တို့ဖြစ်ကြသည်။
အဓိက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘဏ်၊ စုပေါင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ကော်ဖီ လုပ်ငန်းများ
ဦးသိမ်းငွေ(Serge Pun) သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပေကျင်းသို့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက် ဟောင်ကောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၃၄ နှစ်အကြာမှာ ပထမဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဖေဖာ့ဘ်စ် Forbes မဂ္ဂဇင်းက ၎င်းကို “ကမ္ဘာနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပေးသူ”ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တရုတ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ် မြန်မာနှင့် တရုတ်စီးပွားရေး နှစ်ခုစလုံးမှာ ဝင်ရောက်အခြေချနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာမူ အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စာရင်း၌ မပါဝင်ခဲ့ချေ။
အက်ဖ်အမ်အိုင် First Myanmar Investement နှင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော Yoma Strategic တို့ကြားမှ ခွဲထွက်လာသည့် အက်စ်ပီအေ မြန်မာ SPA Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍတို့တွင် အဓိကလုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လေကြောင်းလိုင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ခါတရံ နိုင်ငံခြား ပါတနာများနှင့်လည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။
အဓိကလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ “အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ တရားနည်းလမ်း အကျဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်”တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၎င်းအကြား အငြင်းပွားမှုကို ဖော်ပြခဲ့သည့် အမေရိကန်သံရုံးမှ ပေါက်ကြားသောသတင်းက ဆိုသည်။ ထို့နောက် ၎င်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပိတ်ပင်ထားမှုမှ ဖယ်ရှားရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်သည် ခရိုနီများနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အင်န်အယ်လ်ဒီ) ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက သဘောကျခဲ့ကြသည်။
ဦးချစ်ခိုင်၏ စီးပွားရေးအင်ပါယာသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များမှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အေဒင်ဂရု(ပ်)သည် ဟိုတယ်၊ ဘဏ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များမှာ အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားမြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များနည်းတူ အေဒင်ဂရု(ပ်)သည် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များကဲ့သို့ ၎င်းသည်လည်း စစ်တပ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရသူများ စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ် အနည်းငယ်မှစပြီး လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဦးချစ်ခိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ကာ ဆင်းရဲသော လယ်သမားများ၏ ကလေးများအတွက် တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်လေ့ရှိပြီး
မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်မှတစ်ဆင့် လယ်သမားများ ခေတ်မီလယ်ထွန်ပစ္စည်းများ သုံးနိုင်စေရေးအတွက် အသေးစားချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလေ့ရှိသည်။
*** မွနျမာနိုငျငံ၏ အခမျြးသာဆုံး သူဌေးမြားအကွောငျး ***
ဦးတဇေသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အထငျရှားဆုံး လုပျငနျးရှငျမြားထဲမှ တဈဦးဖွဈပွီး ၁၉၈၈ ခုနှဈ ဆန်ဒပွမှုမြားမှာလညျး ပါဝငျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ ရငျးနှီးသူလညျးဖွဈကာ ၎င်းငျး၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို ပုံမှနျမဟုတျသော နညျးမြားနှငျ့ တညျဆောကျခဲ့သညျ ဆိုသညျ။ ထို့နောကျ ၎င်းငျးက ယခငျ စဈအစိုးရ အဓိကခေါငျးဆောငျဟောငျး ဦးသနျးရှေ ပွောသမြှကို လိုကျလံ လုပျဆောငျနိုငျသောကွောငျ့ နိုငျငံရေးအရ အခှငျ့အလမျးသာမှုကို ရရှိခဲ့သညျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈအတှငျး အမရေိကနျ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနက ၎င်းငျးကို “မွနျမာစဈအစိုးရအတှကျ လကျနကျမှောငျခိုရောငျးဝယျသူနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ လကျကိုငျတုတျတဈဦး”အဖွဈ သတျမှတျခဲ့သညျ။
ဦးသိမျးငှေ(Serge Pun) သညျ မွနျမာနိုငျငံမှ ပကေငျြးသို့ ၁၉၆၅ ခုနှဈဝနျးကငျြက ထှကျခှာသှားခဲ့ပွီးနောကျ ဟောငျကောငျသို့ ပွောငျးရှကေ့ာ အိမျခွံမွလေုပျငနျးကို လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ၃၄ နှဈအကွာမှာ ပထမဆုံးအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံသို့ ၁၉၈၉ ခုနှဈ၌ ပွနျလညျရောကျရှိလာပွီး ၂၀၁၃ ခုနှဈ စကျတငျဘာလက ဖဖော့ဘျဈ Forbes မဂ်ဂဇငျးက ၎င်းငျးကို “ကမ်ဘာနှဈခုကို ပေါငျးစပျပေးသူ”ဟု သတျမှတျခဲ့သညျ။ တရုတျ လုပျငနျးရှငျတဈဦးအဖွဈ မွနျမာနှငျ့ တရုတျစီးပှားရေး နှဈခုစလုံးမှာ ဝငျရောကျအခွခေနြိုငျခဲ့ပွီး နိုငျငံတကာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုမြားကိုလညျး လုပျဆောငျနိုငျခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးမှာမူ အမရေိကနျစီးပှားရေး၏ ပိတျဆို့အရေးယူမှု စာရငျး၌ မပါဝငျခဲ့ခြေ။
*** about the country’s richest man
According to one of the list of the country’s richest man from Frontier Myanmar at the top (6)
(1) Zaw Zaw (Max Myanmar)
(2) U Tun Myint Naing (b) Steven (Asia World)
(3) Za (Htoo)
(4) Serge (b) Ps ဂြ့ (FMI & Yoma)
(5) Michael Moe Myint (MPRL Oil & Gas)
(6) Chit Khaing (Eden).
In the key business groups – Max () Max Myanmar Group
The main types of business – banking, hotels, construction, fuel, Ruby stones and rubber industry
Scott has been working in Japan for Japanese buses, Construction materials and importing generator machines Burma back in 1993. The type of business gradually turned wide capital, including the football stadium was constructed close to the regime and Scott wasaUS blacklist. Later, Scott, the building of the children’s hospitals Construction of rural clinics are Flood your Irrawaddy Division, relief and social development by supporting projects such as running and trying to escape from the image of its company name.
Today Max note (required) Max Myanmar Group, who joined in the activities of Max gas stations, Yangon newly opened Novotel Hotel Novotel Hotel in Mon State and rubber plantations has significant operations.
2. Steven Law (Tun Myint Naing)
– 57 years old
Focal-Asia World company, Asia World Company
The main types of business – construction, Airport and port infrastructure, energy, Real estate development projects
Steven force in the history of Myanmar, the most rigid drug trafficking, son of Lo Hsing Han. The father and son had founded Asia World Co., 1992, was allegedly set up to hide the opium sales. Steven is the father of his drug empire was converted to the official abandonment operations. The owner of the Max Myanmar has played the main building, especially in Naypyidaw airport construction activities. Steven Law, which was close to the military and the US blacklist.
Asia World is the city’s largest port handling operations involved in the Yangon International Airport expansion project. Steven Singapore owns several companies and investments by Singapore companies in the country is alsoakey official. It Magway Football Club in their possession.
3. Tay Za
– 51 years old
In the main-note () Htoo Group
The main types of business – airlines, hotels, timber, Mineral products, bank, Soccer, entertainment businesses
Prominent industries – Air Bagan, AGD Bank, Yangon United Football Club, Bagan Entertainment
Za is one of the country’s most prominent businessmen, who joined in the 1988 protests. It is familiar with Aung San Suu Kyi, who also serves as its business was built with unusual methods. Then, following the previous junta leader Than Shwe toldapolitical opportunity won. 2008, the US Treasury, “it is one of Burma’s arms dealers, and was designated asafinancial shock”.
He said special attention (Pop) was established in 1990 at the remote area focuses on the sale of timber production. The company then Ministry buildings were also built in the city of Naypyidaw. The company’s best-known functions Asia Green Development Bank Asia Green Development Bank, Kandawgyi Hotel Kandawgyi Palace Hotel, stern Airline Air Bagan and Yangon Yangon United Football Club football team.
4. save money (Serge Koch)
– 63 years old
Main – SPA Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)
The main types of business – real estate development, bank, Collective investment, health care, hotels, Restaurant business, coffee industry
Popular activities – Yoma Bank, Yoma Bank FM air FMI Air, Sea Star City Star City, Mitsubishi vehicles Mitsubishi Motors, KFC KFC
Save money (Serge Pun) is left Myanmar in Beijing around 1965 and moved to Hong Kong, after working in the real estate industry. Then, 34 years later, the first to the country in September 2013 back to 1989 Pe ဖာ့ Forbes magazine, it is attributed toacombination of “two worlds”. China as an entrepreneur in both Myanmar and China has been settled, the international investment. In the United States participated in the sanctions list of the business.
Singapore FM and First Myanmar Investement lake split between registered Yoma Strategic SPA SPA Myanmar, the country’s real estate development sector and the financial sector, major operations. The airline, Working in agriculture and other industries often working in conjunction with foreign partners.
5. Michael Moe Myint
Main – MPRL E & P
Main categories – oil and gas production
Michael Moe Myint Myanmar, “one of the most successful and most business methods” are mentioned dispute between the Myanmar Ministry of Energy and the American consulate leaked reports. Then it asked the United States to remove the ban on visas. Michael Moe Myint cronies has been no announcement about the National League for Democracy (NLD) leader Aung San Suu Kyi, and was close to the international business community is pleased.
6. Chit Khaing
– 68 years old
Main note – Aden (required) Eden Group
Key types of business – construction, bank, Restaurant business, hotels, rice, energy, coal, fuel
Prominent business, the law requires MAPCO Myanmar Pioneer Bank Myanma Apex Bank, Hee Tan Hotel Hilton Hotel, Coffee House Fuji Fuji Coffee House
Chit Khaing’s empire began in 1990 in the construction industry and the economy. Its attention, (pop) Hotel Aden Agriculture and industry are the largest bank has occurred. Like other local businesses Aden attention Naypyidaw (chips) and involved in the construction process. Like other entrepreneurs, it also hadamilitary relationship with the international economy playedafiltered list.
Since it isafew years ago worked as social development. Chit Khaing of Rice University team also serves as chairman of the poor farmers’ children often given scholarships
Myanmar’s leading bank for farmers to use modern plow through micro-lending.
Ye Htut Thein
Ref: Mizimma Media